राजा महेन्द्रको हृदयघातबाट निधन भएपछि शुरु भएको मुलुककोआई.सि. यू.सेवा • nepalhealthnews.com
डा. लब नरसिंह जोशी, वरिष्ठ कार्डियाक केयर विशेषज्ञ, नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल || प्रकाशित मिति :2019-02-03 12:01:32
चितवनमा शिकार खेल्दै गर्दा सन् १९७२ मा ५१ वर्षको उमेरमा राजा महेन्द्रको हृदयघात भएर निधन भएपछि देशमा आईसियू सेवाको आवश्यकता महसुस गरियो । त्यसको एक वर्षपछि सन् १९७३ मा वीर अस्पतालमा ५ वटा वेडबाट मेडिकल आईसियू शुरु गरियो । त्यो बेला राजपरिवारले मात्र आईसियू सेवा लिन पाउँथे । यो सेवा अन्य सर्वसाधारणका लागि बन्देज थियो ।
त्यतिबेलाको आईसियू राम्रो थिएन । भुर्इँ तलाको कुनाको कोठामा माया मारेर फाल्ने ठाउँ जस्तो थियो ।
नेपालमा दुई दशकसम्म त्यही आईसियूबाट काम चलाइयो । इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आई.ओ.एम.) अन्तर्गत महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि आईसियू सेवाको विस्तार शुरु भयो ।
शुरुमा त्रि.बि. शिक्षण अस्पतालमा ८ वेडको मेडिकल आईसियू बनाइयो भने क्रिटिकल केयर युनिट पनि शुरु भयो । अहिले त्रि.बि.शिक्षण अस्पतालमा मात्र न्युरो आइसियु, वर्न आइसियू, सर्जिकल आइसियू, ट्रान्सप्लान्ट आइसियू, कार्डियोथोरासिस आइसियूलगायतका धेरै सेवा उपलब्ध छन् ।
देशभरमा अहिलेसम्म ६० आइसियू सेन्टर छन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र ५० ओटा आईसियू सेन्टर सञ्चालनमा छन् । उपत्यका बाहिर विराटनगर, पोखरा , नेपालगञ्ज, बुटवल, भरतपुरमा १० वटा भन्दा बढी आईसियू सेन्टर सञ्चालनमा छन् ।
देशभर करिब ४५० देखि ५५० जति आइसियु बेड रहेका छन् । यही अनुपातमा नेपालमा प्रति १ लाख जनसंख्याका लागि करिब १५ वटा आई.सी.यू. बेड मात्र उपलब्ध छ । त्यस्तै १ लाख जनसंख्याका लागि करिब ७ ओटा भेन्टिलेटर सुविधा भएको आइसियू वेड उपलब्ध छ । जनसंख्याको दृष्टिकोणले यो निकै कम हो ।
आई.सि.यू. उपचार सेवा निकै खर्चिलो छ । प्रतिदिन १५ हजारदेखि २० हजारसम्म खर्च हुन्छ । लाइफ सपोर्टसम्बन्धि अन्य सुविधाका सामान प्रयोग गर्दा खर्च अझै बढ्छ ।
आई.सि.यू.मा पुगेका सबै बिरामी बाँच्न सक्दैनन् भन्ने हुँदैन । नेपाललगायत संसारको तथ्यांक हेर्दा अवस्थाअनुसार ८५ देखि ६० प्रतिशतसम्म आई.सि.यू. बिरामी बाँचेको तथ्यांक छ । आई.सि.यू मा पुगेका १५ देखि ४० प्रतिशत बिरामीको परिणाम राम्रो आउँदैन ।
अहिले सरकारी र निजी क्षेत्रको पहलमा आई.सि.यू. सेवा बढाएर केही हदसम्म मृत्युदर घटाउन सकिएपनि भनेजस्तो उपलब्धी हाँसिल गर्न सकिएको छैन । समयमा नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलको आई.सि.यू.पुगेका १ सय जना बिरामीमध्ये ९० प्रतिशतको ज्यान बचाउन सकिएको छ ।
बढ्दो जनसंख्या, आई.सि.यू.को बढ्दो माग र सोफेस्टिकेसन अफ मेडिकल सर्भिसेसका कारण आई.सि.यू. सेवाहरुको माग बढ्दो छ । एक वर्षअघि नेपाल मेडिसिटीमा १२ बेडबाट आई.सि.यू. सेवा सुरु गरिएकोमा माग बढ्दै गएपछि अहिलेसम्म फरक फरक किसिमका ५० आई.सि.यू.वेड पुगिसकेको छ । त्यसमा मेडिकल आई.सि.यू, न्युरो आई.सि.यू., सर्जिकल आईसियू, कार्डियाक केयर युनिट (सि.सि.यू) पेडियाट्रिक आई.सि.यू.लगायतका धेरै किसिमका आई.सि.यू. वेड रहेका छन् ।
आई.सि.यू.का बिरामीको ज्यान कसरी बचाउन सकिन्छ?
आई.सी.यू.मा वेड, उपकरणका साथै राम्रो नर्सिङ केयरको जरुरत पर्छ । हामीले आई.सि.यू. एवं मेडिकल आई.सी.यू.मा बसेका दुवै बिरामीलाई एकजना बिरामी बराबर एकजना नर्स उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । आई.सि.यू.मा २४ सै घण्टा एमडी तहको डाक्टरहरु हुनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार मेडिकल अफिसर पनि राख्न सकिन्छ ।
संसारमा क्लोज्ड आई.सी.यू. र ओपन आई.सी.यू. भन्ने हुन्छ । क्लोज्ड आई.सी.यू.मा बिरामी पुगेपछि भित्रकै डाक्टरबाट केयरको व्यवस्था हुन्छ । तर ओपन आई.सी.यू.मा भित्रको डाक्टर र बाहिरको डाक्टर मिलेर काम गर्छन् । आई.सी.यू.मा आउने बिरामीको रोग अनुसार प्रयोग गर्ने औषधिको प्रोटोकल बनाउनुपर्छ ।
नेपाल मेडिसिटीमा एक दुई वटा सोफिस्टिकेटेड मेसिनको व्यवस्था छ । जस्तोः ब्लड प्रेसर ‘लो’ भई जीर्ण अवस्थामा पुगेको मुटु सर्पोट गर्ने आई.ए.बि.पि. र एक्मो मेसिनको उपलब्धता आदि । क्रिटिकल केयरमा पुगेका बिरामीको मुटुको पम्पीङ पावर बढाउन विभिन्न औषधि चलाउनुपर्ने हुन्छ भने संक्रमण र सेप्सिस रोक्न हाइ डोजमा एन्टिबायोटिक औषधि चलाउनुपर्छ । यस्ता औषधि एकैपटक दिन नमिल्ने कारण स्लाइनबाट बिस्तारै समय लगाएर दिनुपर्छ । कतिपय औषधि बाफबाट दिनुपर्छ । फरक फरक बिधाका डाक्टर सँगै बसेर मल्टिडिसिपिलिनरी सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । जस्तोः न्यूरो सर्जन, कार्डियोलोजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेसलिस्ट आदि ।
आई.सी.यू.मा संक्रमण रोकथाममा निकै ध्यान दिनुपर्छ । आई.सी.यू.मा बिरामी भेट्न आउने व्यक्तिहरुमा निमोनिया, पेट, आन्द्राको इन्फेक्सन पनि हुनसक्ने भएकाले उनीहरुबाट बिरामीमा पनि सर्नसक्ने सम्भावना भएकाले यसबारे विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । डाक्टर र नर्सले एउटा बिरामीलाई छोएपछि अर्कोलाई हात सफा गरेर मात्र छुनुपर्छ ।
क्रिटिकल केयर युनिट व्यवस्थित नभएमाबिरामीको ज्यान तलमाथि हुनसक्ने भएकाले आई.सी.यू.मा बसेका हरेक जनशक्ति सर्तक हुनुपर्छ । समयमा समस्या पत्ता लागेमा छिटै समाधान गर्न सकिन्छ ।
कस्तो अवस्थाका बिरामीलाई कार्डियाक केयरको आवश्यकता पर्दछ ?
विशेषगरी हृदयघात, हार्ट फेलियर, प्रेसर अचानक बढी भएर आएका बिरामी, मुटुको चाल खराबी भएका, पहिला अपरेशन गरेर पुःन मुटुमा समस्या भएका बिरामीहरुलाई क्रिटिकल कार्डियाक केयरको जरुरत पर्छ ।